Abafakizicelo abakhubazekile abafaka isicelo sokwenza isilinganiso bazokwazi ukufaka isicelo ngokushesha emanyuvesi ayi-5 > Isifo sikashukela
Izicelo ezikhubazekile zivunyelwe ukungena kwisilinganiso semanyuvesi amahlanu ngasikhathi sinye
Photo: Wavebreak Media / I-Lory Photo Bank
UMbuso Duma owamukele okwesithathu, wokugcina ufunda umthethosivivinywa onikeza ilungelo abafakizicelo abaphila nokukhubazeka, abeza "kwisabelomali" ngesilinganiso se-10%, ukufaka isicelo ngokushesha emanyuvesi ayi-5 ezikhethekile ezi-3. Umthetho omusha uqeda ukunikezwa kokubandlulula okuvimbela amalungelo abantu abakhubazekile lapho engena ezikhungweni zemfundo ephakeme yezinhlelo zeziqu zabafundi kanye nezochwepheshe.
Ngokuhambisana nesigaba 52 se-Procedure yokwamukelwa ukuyofunda ezinhlelweni zemfundo ephakeme, abafakizicelo abangena eyunivesithi ngasikhathi sinye banelungelo lokuhambisa imibhalo emanyuvesi amahlanu ngobungcweti obuthathu. Kodwa-ke, abafakizicelo abakhubazekile abanelungelo lokufunda ngokukhishwa kwemali ebekiwe bangafaka isicelo esikhethekile kuphela eyunivesithi eyodwa. Ngaphezu kwalokho, amanyuvesi ngamanye angenza izivivinyo zokungena ezingeziwe zephrofayli noma zokuma kwekhono.
Ngokwenqubo yamanje yokwamukelwa kokufunda ezinhlelweni zemfundo ephakeme, abafaka izicelo abakhubazekile abafaka izicelo zezifundo kuma-undergraduate noma ezinhlelweni ezinolwazi banelungelo lokwamukelwa ngaphandle komncintiswano ngaphakathi kwesilinganiso. Kodwa-ke, ngokungafani nelungelo lokwemukelwa ngaphandle kwezivivinyo zokungena, lokhu akuqinisekisi ukuthi uzokwamukelwa, noma ephumelele izivivinyo zokungena.
Esimweni lapho inani labafakizicelo elikhubazekile lidlula inani lesilinganiso, ukukhethwa kokuncintisana kungaqhutshwa phakathi kwabo. Ngaphezu kwalokho, abanye abantu abaphila nokukhubazeka bazokwamukelwa hhayi ngemiphumela yokuhlolwa, kodwa ngokuya ngemiphumela yokuhlolwa kokungena, eyenziwa yunivesithi ngokwayo. Ukuthi uyidlulisile noma cha, kuzokwaziwa ngemuva kokufaka isicelo sokwamukelwa eyunivesithi efanelekile, futhi hhayi ngaphambi kwalokho, uma kwenzeka ekwamukelweni ngokwemiphumela yokuhlolwa.
Umthetho omusha ususa le mikhawulo. Manje izingane ezikhubazekile, abantu abakhubazekile bamaqembu I no-II, abantu abakhubazekile kusukela ebuntwaneni, abantu abakhubazekile ngenxa yokuhlukumezeka kwezempi noma ukugula okutholwe ngesikhathi senkonzo yezempi, bangasebenzisa ilungelo lokwamukelwa ngaphandle komncintiswano wokufunda ngaphansi kwezinhlelo ze-bachelor kanye nezinhlelo ezikhethekile ngokuchithwa kwemali yesabelomali ngaphakathi kwesilinganiso esinqunyelwe kuncike ekuphumeleleni ngempumelelo kwezivivinyo zokungena ngokuthumela izicelo kuma-rhinestones ngokushesha emanyuvesi ayi-5 ezikhethekile ezi-3.
"Lo mthethosivivinywa uqeda uhlelo lokubandlulula oluvimbela ilungelo lomuntu okhubazekile lokusebenzisa ilungelo elikhethekile uma engena emanyuvesi ezinhlelo zeziqu zabafundi kanye nezochwepheshe," kubhala ababhali.
Phambilini sibike ukuthi uMbuso Duma wamukela umthethosivivinywa olekelela ukungena kwabantu abakhubazekile emanyuvesi kanye naseminyangweni yokulungiselela. Manje, lapho sekwamukelwe, ngeke kudingeke ukuthi unikeze umbono we-ITU ngokungabikho kokuphulwa kokuqeqeshwa, isitifiketi esivamile sezokwanela.
Siphinde sabhala ukuthi uNgqongqoshe Wezemfundo Nesayensi Yezwe laseRussia u-Olga Vasilyeva wasayina umyalo wokuchibiyela Inqubo yokwamukelwa kokufunda ezinhlelweni zemfundo ephakeme. Ngokwalo mthetho, ngokunqoba emiqhudelwaneni yamakhono ochwepheshe, abantu abakhubazekile bazothola amaphuzu amaningi uma bethola imvume.
Namuhla, abantu abakhubazekile banelungelo lokwamukelwa ngaphandle komncintiswano ngaphakathi kwesilinganiso senyuvesi eyodwa.
Kepha lokhu akuqinisekisi ukubhaliswa komuntu ofake isicelo ophumelele ezivivinyweni zokungena. Manje isibalo sabafakizicelo abakhubazekile seqa isilinganiso, ngakho-ke kuzoba nomncintiswano owengeziwe phakathi kwabo.
Lo mthetho omusha, ngokusho kwabezindaba abezindaba zeDuma, ususa imingcele yamalungelo abantu abaphila nokukhubazeka lapho ungena ezikhungweni zemfundo ephakeme ngezinhlelo zeziqu zabafundi kanye nezochwepheshe.